Maitiro ekuisa Adobe Cloud kunyorera pane chero Gnu / Linux kugovera | Linux Vakapindwa muropa
Zvishandiso zvinongova zveWindows zvinogona kuiswa pane chero kupi kweGnu / Linux kuendesa kune maemulators uye maficha akadai seWine, asi dzimwe nguva mamwe mapurogiramu anoramba nekuda kwemamwe maraibhurari uye magadzirirwo avanoda, sezvazviri nezvikumbiro kubva kuAdobe Cloud.
Adobe Cloud ibasa reAdobe iro inosanganisira kuve nemakore ekushandisa, kureva kuti, kushandisa iro gore. Nekudaro, Adobe Photoshop, Adobe Acrobat kana Adobe lightroom inogona kuwiriraniswa nemamwe makomputa uye kutogovana mapurojekiti uye marongero. Ndosaka tichizokuudza maitiro ekuisa iyo Adobe Cloud suite pane chero Gnu / Linux kugovera.
Kuisa Adobe Cloud, tinofanira kutanga gadza PlayonLinux emulator, ine simba emulator iyo ichagadzirira iyo yakagadzirirwa hunyanzvi yeyese mafomu atinosarudza. Nekudaro, isu tinovhura iyo terminal uye tinyore zvinotevera
Isu tichachinja apt-tora kuraira kune software maneja wekugovera kwedu. Ukangopedza kuisa chirongwa ichi, tinoenda kune izvi github repository izvo zvine chinyorwa chinozobatsira kuiswa kweAdobe Cloud. Kana tangova nazvo, tinovhura playonlinux uye toenda kune Zvishandiso-> Mhanya yemuno script menyu (kana tiinayo muchiSpanish ichave Zvishandiso-> Mhanya script kubva pakombuta) isu tinosarudza script yatakatora pasi uye application ichagadzirwa. Zvino chete isu tinofanirwa kuisa iyo data yeedu Adobe Cloud account kuitira kuti mashandisirwo uye magadzirirwo atakabatanidza agadzirwa.
Tinofanira kurangarira izvozvo kana PlayOnLinux kana script inokupa iyo Adobe Cloud account asi zvinotibatsira kuisa ino software asi isu tinofanirwa kutenga kare. Izvo zvakakosha nekuti vashandisi vazhinji vanofunga kuti PlayOnLinux inokupa iyo software yatinosarudza uye haina kudaro, asi inoigadzirira isu kuti tiise iyo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Maitiro ekuisa Adobe Cloud kunyorera pane chero Gnu / Linux kugovera
Kune avo vanochema vanogunun'una kuti Photoshop haisi kuzove nedambudziko, nekuti vese vakabhadhara rezinesi rinodhura.
Kana icho chiri chinyorwa chinoda kuziva, vazhinji vanogunun'una kuti photoshop, autocad ... haisi mune linux asi zvirokwazvo vazhinji veavo vanogunun'una kuti zvirongwa zvisipo havasati vabhadhara rezinesi saka havafanirwe kunge vaine zvirongwa izvi muWindows, mune Dzimwe nguva zvinotonyanya kuvhundutsa nekuti vanoshandisa zvimwe zvezvirongwa, pirate, izvo zvisiri muGNU Linux yezvinhu zvavanogona kuita neemahara software, zvirokwazvo iyo pirate photoshop inayo pane anopfuura uyo asiri mutori wemifananidzo kana dhizaini.
J. Rincon akadaro
Kune avo vedu vanonamata vanobhadhara mubhadharo wemwedzi wega weAdobe mufananidzo manejimendi package, inyaya huru, kumhanyisa lightroom pamushini chaiwo neWin7, kunyangwe iine 15Gb yeRam, haina kunyatsoita sekushandisa zvese (24gb) mu Linux. Ngatione kuti zvinoshanda sei.
Pane chero munhu akaisa Nik's plugins?
Pindura kuna J. Rincon
Iyo nyowani vhezheni yeKali Linux 2018.2 yave kuwanikwa
Goverana yako keyboard uye mbeva nemamwe makomputa neSynergy